အသက် ၃၃ နှစ် - DE၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ မုန်းတီးစိတ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ကပေါက်သည်
အသက် (၃၃) နှစ် - DE၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊
ငါ 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုပြီးစီးခဲ့ပြီတကား ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ဤအတွေ့အကြုံကနေပိုကောင်းတဲ့လူကိုဖြစ်လာပြီလော ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်မရငါထင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ငါ့ကိုရှင်းပြခွင့်ပြုရန်။ ငါ 33 ဖြစ်ကြောင်းကို, နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်များအတွက် PMO စှဲလမျးသူဖြစ်ရပြီ။
ဤနေရာတွင်အများအပြားကဲ့သို့ပင်, ငါအင်တာနက်နှင့်အတူကြီးပြင်းနှင့်က "ဟက်ကာအမျိုးအစား" ငါသည်သတင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူကိုစှဲခဲ့, မြေအောက် BBS ပျဉ်ပြား, 4Chan (up ပြုလုပ်သန့်စင်တယ်မတိုင်မီ), TOR ကိုနှင့်ကိုစည်းကမ်းအကြောင်းအရာရန်လွယ်ကူရှိရာကအခြား Non-ခေတ်ရေစီးကြောင်းန်ဆောင်မှုများဖြစ်ခြင်း တို့ကလာကြ၏။ ငါ့အကြည့်အလေ့အထတစ်ခုအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးမဟုတ်တော့ငါ့ကိုတယ်သောအချက်မှပို fetishized ဖြစ်လာခဲ့သည်နှိုးဆော်ခြင်း - ငါ့ကိုပယ်ရဖို့အစွန်းရောက်စျေးမှာတန်ဖိုးကိုယူခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး PMO သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်ကျွန်မနောက်ကျောကိုငါ့အသိတရားလာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအော့နှလုံးနာရလိမ့်မည်။ ငါသည်ဤငါပယ်ရရှိရန်သုံးစွဲဖို့ဖူးသောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ငါအမှန်တကယ်အသက်တာ၌လိင်ဤအမျိုးအစားရှိချင်တော့မှ "ထင်မလဲ ငါပျက်စီးနေပါတယ်? "
ငါ၏အစွဲစဉ်အတွင်းငါ့အသက်ကိုလူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုတစ်ခု shell ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ဒါ PMO အိပ်ရာမဝင်မီညစဉ်ညတိုင်းလေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ shit ယူပြီးအဖြစ် "သဘာဝ" အဖြစ်ခဲ့တာ - ငါအငယ်ငါ command ကိုအပေါ်ခက်ရနိုင်မယ့် virile လူတစ်ဦးအခြို့သောစိတ်ကျေနပ်မှုဖြင့်အစားထိုးခံရသောအခါကျွန်မခံစားခဲ့ရဒုစရိုက်ဖြေ။ သို့သော်ရှိသမျှသောအတ္တကြီးနှင့်တကယ်တော့ငါစိတ်ပိုင်းစိတ်ပျက်စရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုငါ၏အနှစ်ထံမှပျက်စီးခဲ့ - ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဝန်ခံဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့တစ်ခုခု - ပင် NoFap တူသောအမည်မသိအွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခု၌တည်၏။ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းကဒီကမ်ဘာပျေါတှငျခဲ့တူသော feeling, မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကနေ detach လုပ်လိုက်သောခဲ့သည်။ ကျွန်မစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေခဲ့ပါသည်နှင့် Fapping ငါ၏အသာ dopamine ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မလျှို့ဝှက်စွာမျှဘယ်လောက်ပဲချိုမြိန်သို့မဟုတ်ကောင်းသော, ငါ့ deviant အလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်, အဘယ်သူမျှထိုမိနျးမကိုကွောကျရှံ့, အမျိုးသမီးအဖော်၏မထိုက်တန်သလိုခံစားရတယ်။ ငါမယ့်အစားငါအမြဲ "ဟုပူပမိန်းကလေးတစ်ကယ်တင်တော်မူ၏" သူအဖြူ Knight ကစားရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်တဲ့ "ကောင်းသောမိန်းကလေး" ထိုက်ဘူး - များစွာသောတိုတောင်းသောသက်တမ်းရှိငါ့အအားထုတ်မှုများအတွက်ပြသနိုင်ဖို့ဆက်ဆံရေး (ပျက်ကွက်) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုများစွဲကုမ္ပဏီကဲ့သို့အရှာလေ့ရှိပါတယ်။ ငါလူမှုရေးအရအဆင်မပြေခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသောကွောငျ့ငါပေါ်သို့ကျင်းပအနည်းငယ်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီငါဖြစ်၏တဲ့သူမဟုတ်ပါ: ဒါဟာကျွန်မရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါအသက်ရှင်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှာတွေ့နိုင်ဖို့လိုအပ်နှင့် Reddit ငါတစ်ဦး avid အသုံးပြုသူအဖြစ် NoFap သတိထားသို့သော်ရီစရာ PMO ရှောင်အစစ်အမှန်ဘဝအပြောင်းအလဲများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ သို့သော်ငါသည်ငါ့ PMO အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအကြောင်းကိုငါ့အတွေပေါ်မှာမကောင်းမြင်စိတ်တွေဖော်ထုတ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် NoFap ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကောင်လေးငါအံ့အားသင့်ခဲ့ ...
ငါတကယ်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်ငရဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြေကွဲလုမတတ်သကဲ့သို့ငါ၏ဘောလုံးစာသားမီးရှို့ကြ၏။ ငါတောင်မှအနည်းငယ်ထိတွေ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်နာကျင်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါ့ကျောပေါ်အိပ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်တဏှာကြီးနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးတစ်ပတ်သုန်မှုန်ခဲ့ - ငါ့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှငြင်းပယ်ခံနေရ dopamine ၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့် ပို. ပင်ယုံကြည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ ငါကကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူရက်ပေါင်း 32 မှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုကာလ၌ငါသည်ဤခွဲများအတွက်အခြားသူများဖော်ပြခဲ့သော "အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ" ၏များစွာသောသတိပြုမိသည်။ ငါ 1 ရက်သတ္တပတ်အမှတ်အသားအကြောင်းကိုမှာသောနောက်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်ရောက်သွားတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ငါ 90 နေ့ကအခမ်းအနားစတင်သည့်အဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်သဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူရပါဘူး။ point ဖြစ်လျက်ရှိ: ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး - ဤလွယ်ကူသောစိန်ခေါ်မှုမဟုတ်ပါ ... ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဒါတန်ဖိုးရှိပါ!
လူမှုစိုးရိမ်စိတ်သွားပြီ - NoFap ခင်မှာငါကပိုလူမှုရေးဖြစ်ကူညီရန် Xanax သို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးရတဲ့၏ခါနီးပေါ်ခဲ့သည်။ ငါ PMO Bing ပေါ်တွင်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းအိမ်မှာ "ဖုံးကွယ်" လိမ့်မယ်။ ငါထွက်သွားပါလိမ့်မည်သည့်အခါလူတိုင်းကိုငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိနှင့်လျှို့ဝှက်စွာပဲတစ်ဦးတည်းဖြစ်လိုတူသောငါခံစားရတယ်။ အခုတော့? ပြက်လုံးအောင်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကမ်းခြေ / ရုပ်ရှင် / ကခုန် / etc အတူတကွခရီးစဉ်ချပြီး - - လအနည်းငယ်အကြာကနေ 180 turnaround ငါပြန်ငါ၏အဟောင်းများကိုလူမှုရေးနည်းလမ်းများမှဖြစ်၏။
ပို၍ ယုံကြည်မှုပိုရှိခြင်း - အကယ်၍ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမတော်တဆထိခိုက်မိလျှင်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမပေးမီ။ ငါနှင့်လူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်မှုရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခုလား။ နေရာများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိခြင်း၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံနှင့်ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်လွယ်ကူစွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်လုပ်ရပ်များသည်အခြားသူများထက် ပို၍ အရေးကြီးသည် (သို့မဟုတ် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟု) ခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကကဲ့သို့ပင်မတူပါ။
ကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ - ငါအကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေကောင်လေးဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောငွေရှာဖြစ်သော်လည်း, အစဉ်မပြတ်ငါငါထိုကဲ့သို့သော beta ကိုရှိရာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ ငါတောင်မှပဲ (ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိသည်ဖို့မထိုက်တန်သလိုခံစားရတယ်) ကိုတစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာအပေါငျးတို့သရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲငါ၏အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ရဖို့ပြည့်တန်ဆာဆင်ခြင်၏။ အခုတော့? NoFap ၏အကြောင်းကို3လအကြာ (ကျနော်ပထမဦးဆုံးလအနည်းငယ်အတွင်းအကြိမ်အနည်းငယ် reset) ငါပြီးနောက်ပါတီမှာမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူ့ကိုငါတွေ့သောအခါငါ့အတံဆိပ်နေ့က2အပေါ်ခဲ့ပါတယ် - ဒါပေမဲ့ငါကသူကိုဤထော့နဲ့အလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့အကြှနျုပျ၏ကြိုးစားရကျိုးနပ်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရှာဖွေသုံးစွဲသွားမည်ဟုအဆိုပါအချိန်ထို့နောက် PMO ငါအစားယနေ့အထိဒီမိန်းကလေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အခုတော့ 90 ရက်အကြာတွင်သူမသည်ငါနှင့်အတူနေထိုင်ပြီးကျနော်တို့လက်ထပ်ထိမ်းမြား / လေးတွေအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံ - ငါမသိဘဲလိင်ကာလအတွင်းပုံမှန်အော်ဂဇင်ကိုခွင့်ပြုကြောင်းသဘာဝသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်တက် messed ခဲ့ PMO နှစ်ပေါင်းများစွာ မှစ. ။ ငါခက်ခဲရပေမယ့်ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ချင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ငါလိင်ရှိသည်ဖို့ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိရာအမှတ် DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ခဲ့နိုင်ဘူး။ အခုတော့? ဒါဟာတည်ငြိမ်ရည်းစားရှိသည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကူးအပြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူမသည်ငါနှင့်အတူမေတ္တာရှင်များနှင့်လူနာခဲ့ - ငါသည်ကိုယ်နှင့်အတူမဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ခုခု။ အကြှနျုပျ၏ DE အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပြီး, နှောင့်နှေးများအတွက်နည်းစနစ်ယခုသူမ၏အော်ဂဇင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်အသုံးပြုကြသည်။ ငါ့အတက် pent လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယခုအခါတရားဝင်ထွက်ပေါက်ရှိပြီးဒါဟာကျွန်မနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ဖြေ၏ခံစားချက်များကိုမပါဘဲဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါဖြစ် soooooo ကောင်းသောခံစားရ၏။
ကျန်းမာတဲ့အတှေးအ - ငါသည်ကိုယ်ကိုမုန်းလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအတွေးထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မသတ်သေဆင်ခြင်၏။ ငါအစဉ်အမြဲအိပ်နိုင်ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်။ အခုတော့? အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာအတိအကျတူညီဘဝ (အတူတူပင်အလုပ်, တူညီတဲ့ကားအတူတူပင်ပြဿနာများကို) ဖြစ်ပါသည်သေးဘဝမှာလူနဲ့အခြေအနေသစ်ကို set ကိုနှိုးဖို့ကျွန်မကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သင့်စိတ်ကိုတကယ်သင့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ဖန်တီးပါဘူး။ ကျန်းမာစိတ်ကို = ကျန်းမာဘဝ။ မကျန်းမာစိတ်ကို = ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဘဝ။
*TL / DR: NoFap ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရှုမြင်လမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာငါ့ကို t ကိုဂုဏ်ယူဖြစ်တစ်ခုခုပေးထားတယျ။ ဒါဟာငါ့ကို Self-စည်းကမ်းဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။ ဒါဟာငါရှေ့ထက်ငါ့ကိုပိုကောင်းစေတော်မူပြီ။ *
ဒီ red-subditdit ၌ပါသောရေးသားချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ကြောင်းသိရခြင်းက ၀ မ်းသာပါသည်။ PMO မပါပဲဘဝသည်တကယ်ကောင်းလာသည်။ တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောရသည်ကိုသင်နားလည်သည် / ယုံကြည်လိမ့်မည် (သင်ကိုယ်တိုင်လက်ရှိခံစားမှုမခံစားရလျှင်ပင်) ။ ငါအနည်းဆုံးလူတစ် ဦး အားစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်နှင့်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်။ ငါပြောင်းလဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်၌ကျွန်ုပ်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုမှ 90 ရက်ပေါင်း! PMO Self-အလွဲသုံးစားမှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှု၏အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်
by craphty 90 ရက်ပတ်လုံး
UPDATE 180 ကို DAYS
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခရီးသွားများ၊ ကျွန်ုပ်၏“ ပုံမှန်အသစ်” နှင့် ပတ်သတ်၍ မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဤတိုးတက်မှုခရီးတွင်ပါ ၀ င်သူများအတွက်အားပေးသောစကားအနည်းငယ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ PMO ကိုရှောင်ရှားသည့်ကျွန်ုပ်၏ ၁၈၀ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၃၃ နှစ်ရှိပြီးအတိတ်ကညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်မည်မျှဖြုန်းတီးခဲ့ရသည်ကိုရှက်မိသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ နှစ်ဆတိုးခဲ့သည်။self.NoFap)